Ari jire ka mid noqday wufuudda ganacsi ee Madaxweynaha Turkiga | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Ari jire ka mid noqday wufuudda ganacsi ee Madaxweynaha Turkiga
“Ahmed Oikdash” sanadkii 1974-kii ayuu usoo wareegay Gobolka Izmir isagoo ka shaqa bilaabay goob ganacsi oo lagu iibiyo kabaha, in muddo ah kaddib isaga iyo walaalkii waxay ku shirkoobeen warshad sameysa Kabaha, dhawr sano kaddib ari jirnimadiisii.
Tartiib tartiib ayuu isbedel ugu sameeyay noloshiisa ilaa riyadiisii ay isku rogtay run markii uu kamid noqday Wufuudda ganacsi ee Recep Tayyip Erdogan, Madaxweynaha Turkiga oo xilligaasi ahaa Ra’isulwasaare.
Oikdash Warshadiisa yar waxa uu ku bilaabay soo saarista kabaha dumarka iyo carruurta isagoo ku iibin jiray gudaha suuqyada ku yaala Turkiga.
Si aan buurneyn ayuu ku bilaabay inuu u iib geeyo badeecadiisa Suuqyada dibadda ilaa 2008-dii, xillligaas oo Oikdash ay soo food saartay dhibaato dhaqaale oo keentay hoos u dhac in laga dareemo dhoofintiisii.
Sanad kaddib jabkaas 2009-kii waxa uu qeyb ka noqday wafdi ganacsi oo Recep Tayyip Erdogan ku wehliyay socdaal uu ku tagay dalka Liibiya, safarkaas ayaa noqday kii isbedelka ku keenay noloshiisa ganacsi.
Ahmed Oikdash intii uu safarrada ku wehlinayay madaxweynaha Turkiga waxa u suuragashay inuu soo xirto khadad cusub oo ganacsi si uu u dardar geliyo badeeca dhoofintiisa.
Wakaaladda Wararka ee Anatolia wareysi ay la yeelatay Oikdash waxa uu ku sheegay in markii hore uu ku bilaabay warshaddiisa soo saarista kabaha dumarka iyo caruurta, baadi goob xooganna uu ugu jiray meel uu u iib geeyo badeecadiisa balse 2009-kii safarkii uu ku wehliyay Erdogan oo u ambabaxay dalka Libya islamarkaana ay uga sii talaabeen dhankaa iyo Jamhuuriyadda Iran kaddib Su’aal uu Erdogan ka waydiiyay ganacsigiisa halka uu marayo ayuu ugu jawaabay “5000” oo Gini taas uu aad u dhaliilay Erdogan.
Hase ahaatee waxa uu shaaciyay dhaliishaas iney noqotay tii isaga boorka ka jaftay islamarkaana gelisay xamaasad la xiriirta shaqo kordhin.
Waxa uu yiri “Kolkii hore suuqa waxa aan keeni jiray wax soo saar ah 5% hase ahaatee dhaliishii Erdogan kaddib waxaan gaarsiiyay 30% taas oo la macno ah inaan uga mahad celinayo Erdogan oo xilligaas ahaa Ra’isul wasaaraha Turkiga”.
Oikdash waa uu sii hadlay waxa uu tilmaamay inuu Erdogan la tagay 42 dowladood, Sanadkii hore kaliya waxa Nudo ahaan (Sample) u dhoofinay ayuu yiri 500 oo kun halka uu ku tala jiro inuu wax soo saarkiisa uu gaarsiiyo 70% Sanadda 2023-ka.
Rajo wanaagsan inuu ka qabo ayuu carabaabay Oikdash suuqyada qaaradda Afrika ka gadaal markii madaxwene Erdogan uu la yimid qaaradda safaradii ugu danbeeyay.
“Waxaan kamid ahaa Wufuuddii ganacsi ee safaradii Erdogan uu ku yimid dhawr dawladood oo ka tirsan qaaradda Afrika, waxaana ka sameeyay heshiisyo ganacsi oo waawayn sida dalka Kenya oo Sample ahaan aan u keenay 300 kun oo wax soo saarkeyga kamid ah ” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Oikdash.
Ahmed Oikdash ugu danbeyntii waxa uu daaha ka qaaday in imminka uu iskaashi la sameynayo ganacsato ku sugan dowlado kale isagoo yiri ” waxaan wax u dhoofinnaa dalalka Italy, Serbia, Greece, Kenya, Ghana iyo Azerbaijan, anagoo hadda bilawnay soo saarista kabaha ragga”.
Ma malaysaneyn ayuu yiri ilaa iyo xadkaan guusha ah inaan ka gaari doonno ganacsiga dibadda ah.
Shirkaddiisa hadda waxa ay qorsheyneysaa iney shaqaaleysiiso 100 ruux si loo soo saaro 5,000 oo kabo ah Maalinkii sidoo kale Ramadaanka kaddib ayuu qorsheynayaa iskaashi ganacsi inuu ka soo sameeyo Jamhuuriyadda Congo oo kamid ah wadamada dhaca bartamaha qaaradda Afrika.
Xigasho: Turk Press
W/D: Ismail Mohamed Samatar
Previous: Mobile Caaqil ah kii ugu raqiisanaa oo laga soo saaray dalka Hindiya